Nhau - Kudzora kwekugadzirisa kwemuchina kweCNC lathe mukugadzira
Iko kukanganisa kweCNC lathe machining kurongeka kunowanzo kukonzerwa nezvikonzero zvinoverengeka zvinotevera, chimwe chikonzero chemidziyo, yechipiri idambudziko rekushandisa, chechitatu kuronga, chechina ndiko kukanganisa kwekutarisa, nhasi Wally michina tekinoroji uye iwe tsanangura muchidimbu izvi mativi.
1. Iyo chaiyo machining yeCCC lathe inokonzerwa nemidziyo inowanzo kukonzerwa nesystem kukanganisa kwemuchina pachawo uye kukanganisa kunokonzerwa nekumhanya kwemuchina wekushandisa. Mukuita kwekushandisa chishandiso chemushini, epakati zvikamu senge lead lead inopfekwa, zvichikonzera kuwedzera kwegap, uye iko kukuru iko kukanganisa kwechishina chishandiso, izvo zvinokanganisa iwo machining kunyatso kweCNC lathe;
2. Mukuita kweNC lathe kugadzira, zvakakosha kuti usarudze yekucheka chishandiso. Chishandiso chisina kukodzera chinotungamira kune yakanyanya kukwirisa muchina mutoro uye chishandiso kupfeka nekukurumidza, izvo zvinotungamira kune CNC lathe chaiyo haigone kusangana nezvinodiwa zvechigadzirwa;
3. Izvo zvisinganzwisisike ekucheka ma parameter akaiswa panguva yehurongwa zvakare chimwe chezvikonzero zvekuti iko kugadzirwa kwemachini kweCCC lathe hakugone kuvimbiswa. Iyo yekucheka ma parameter efuru uye shanduko inofanirwa kuiswa nekubatanidza chishandiso, zvinhu zvehunhu nemidziyo, kuitira kuti ive nechokwadi chekugadzirisa kwemakonzo kweCCC lathe;
4. Mukuita kweNC lathe kugadzira, iyo datum kukanganisa kwezvigadzirwa zvakare chimwe chechikonzero chekuti iko kugadziriswa kwemuchina kweCNC lathe haigone kusangana nezvinodiwa. Kuburikidza nekubatanidzwa kwekutendeuka uye yekugaya, iyo yekuchinjisa nguva inogona kuderedzwa zvakanyanya sezvazvinogona, izvo zvinogona kudzora kukanganisa kwechipiri kugadzirisa pane iko iko kwekugadzirisa kweiyo CNC lathe inokonzerwa nekuchinja kwedatum.
Izvo zviri pamusoro zviri volley muchina tekinoroji kune wese munhu kuti agovane pamusoro wenyaya weCNC lathe machine machira kunyatso, tariro yekupa CNC machine vanhu kuti vataure.